Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Uxolo ngoKhenketho ngoku-Nangona Ingekho Kuphela
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • iindaba • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Uxolo lungaphezu kokungabikho kwemfazwe - akukho luxolo, akukho uKhenketho. Liyinyaniso elokuba, ixesha lemfazwe linamaqhawe alo adumileyo, ngoxa uxolo ‘lunamagorha alo angathethiyo.’ Ngamaxesha e-COVID ngabongikazi, oogqirha, abaphambili kunye nabantu benkonzo. Yihotele ye-SME, indawo yokutyela kunye nomnini we-pub, kunye nabasebenzi ababonelela ngeenkonzo zonyango kunye nempilo entle kangangoko benako ngeemaski kunye nokuhamba umgama-nokwazi ukuba okunye ukuvalwa kuya kukhupha ishishini.
Xa kwafika izikhukula, zitshabalalisa amasimi, izindlu, izakhiwo zikawonke-wonke, nendlela yokuphila yabantu, amatsha-ntliziyo asuka kufuphi nakude agxalathelana ukuya kunceda ngenxa yesisa.
Abantu banikela ngeentliziyo ezipheleleyo.
Kwimimandla edlakazwe yimililo yamadlelo, abacimi-mlilo abakhaliphileyo, ngokufuthi abangaphantsi ngokungenathemba kumandla omlilo ovuthuzayo, babesilwa imini nobusuku, de badinwe ngokupheleleyo.
Ngequbuliso, i-egotism, i-hedonism kunye ne-comfort zoning, kungenjalo ibonakaliswe njengeempawu zokuziphatha kakubi, yaziva ngathi ikhutshiwe, inika enye indlela ngaphandle komnqweno wokuthanda ummelwane wakho. Ii-Cataclysms zidala eyazo imithetho. Ixesha loxolo lifumene amaqhawe alo, kwaye ngexesha lengozi kunye nentlekele abantu banokubonisa elinye icala labo - inokuba yinto engcono kakhulu.
Umsebenzi unzima, ukusilela kuyinyani, ukuba nethemba kubalulekile, nangona kunjalo. Unxunguphalo olukhawulezileyo ludla ngokuqalisa uncedo lokuqala – kwaye olukhawulezayo, ngelixa uphuhliso oluthi ngokuthe ngcembe lukhule lubulale luswele ulwazi olupheleleyo lwabantu lokuvusa inyathelo elikhawulezileyo. Ii-asethi, ezizuzwe inyathelo nenyathelo, ziyakuthatha ixesha lazo ukuthwala isiqhamo, ngelixa amathuba omntu ngamnye okuba iintshatsheli 'ziqaqambe' elindile.
Ngokuqhelekileyo, ubugorha ngexesha loxolo kunye nonxunguphalo olungephi lusenokungabangeli mdla kangako, kodwa lungabi naxabiso lingaphantsi (“iheroic pacifism ngokungathandabuzekiyo inokucinga,” utsho. Albert Einstein). Uxolo asingomntu ozenzelayo; uxolo luphuma kwizenzo zethu. Akufuneki ukuthetha ukuba oku kunika umceli mngeni wokwenene kubaphathi bezoKhenketho kunye noKhenketho njengeengcali zonxibelelwano ukuba zisebenze!
Njengabahambi, sihlawula imali ngeeholide zethu. Oko kuthetha ukuba siyakuxabisa ukunandipha iiholide zethu ngaphezu kwemali esiyihlawulele oko. Sifanele sazi ngenyhweba yokuba ziindwendwe zabasimkeli zindwendwe. Ukuziphatha kwentlalo ngundoqo kukuphila kunye. Ngakolunye uhlangothi, ukuba thina - njengababuki zindwendwe - sivakalelwa kukuba ububele esibunika iindwendwe zethu busongela ukugqiba njengoluhlobo oluthile lokuthatha abantu abangabaziyo, ngoko ukuzithemba kwethu kwezentlalo kuphulwa kakhulu. Ukudala ukuphulwa kunye nokungavisisani yenye indlela yokubangela ukungcoliseka kwendalo.
'Iliso' lethu lokuqonda indalo kunye novelwano lomntu kufuneka lilolwe, ukuze sazi okulungileyo kokusingqongileyo (kwangaphandle) kunye neengqondo (zangaphakathi) 'zendalo.' Kukho uxolo kuphela, ukuba lwendele ngaphakathi kuthi njengabantu ngabanye, abasabelana ngemvo yesidima omnye komnye. Uhambo kunye noKhenketho lubonelela ngenqanaba lehlabathi kwizinto ezilungileyo - okanye ezimbi - ukuziqhelanisa. Omnye umntu wakha wathi, kufana neliso elingenakuzibona ngokwalo. Isenokufunda ukwazisa imbono yayo kwimekobume ehlala kuyo, kufana neetalente zomfoti eziguqukayo.
Xa sijonga ibango lezoKhenketho elibhabhayo liphakamisa ukuqondana kwamazwe ngamazwe, sinokufumanisa ukuba: Eyona nto imbi kakhulu yinkohliso (umz. uhambo oluquka konke!), kokona kulungileyo kukunqwenela oko. Yondla intsomi ekwabelwana ngayo ngabachaphazelekayo ukuba ucalucalulo luya kunyamalala, kwaye ivuselela ithemba elithe cwaka ekwabelwana ngalo nathi, abahambi, ukuba le nto ayinakwenzeka, kwaye sinokukwazi ukuma ngezimvo zethu ezisemgangathweni. Kunokuba sibe ngabantu basekuhlaleni, sidibana nabantu basekhaya. Isiphumo esicetywayo ukuya ezantsi ukuya phezulu ekuqondeni amazwe ngamazwe sincinci: Ngaphandle kokujoyina kukhenketho lokubuka, ukonwabela ubugcisa bokupheka bamamkeli okanye ukukhangela kwiindawo zokuthenga ezimibalabala, uninzi lwabafowunelwa ngexesha leholide abaqhelekanga kwaye abaqhelekanga kuphela. Ziyaphela ngokuhamba kwexesha, kanye njengokuba iinkolelo zohambo zisenza ngamanye amaxesha.
Inkangeleko yangaphandle ye-'Tourism Unlimited' iye yavela ngenxa yokuba iimpawu zezentlalo ezazifudula zihluke kakhulu ziye zalubala okanye zacinywa kwaphela. Iindawo zokufikela kwiiholide ezikhe zajongwa njengezodwa zinikezelwa ngoku kuyo nayiphi na ikhathalogu okanye iwebhusayithi.
Ezinye iindawo ziye zadlula kwinguqu ebalaseleyo, umzekelo, iBaden-Baden: eyayifudula ibizwa ngokuba 'yikomkhulu lasehlotyeni laseYurophu,' apho izityebi kunye nabahle babesenza eyabo 'iVanity Fair,' isixeko se-spa namhlanje siyindawo yokuphola. intlalontle nakubaxhasi bentlalontle. Okanye khetha i-Madeira, apho kwii-sanatoriums ezikhethekileyo kwimozulu epholileyo, umgangatho ophezulu wehlabathi waphinda wachacha: Namhlanje i-island state yindawo yokuhamba ngenqanawa kunye nephakheji yokhenketho.
Eyona nto ibaluleke nangakumbi, yimeko yaseVenice: Yonyulwa njengeLifa leMveli leHlabathi leZizwe eziManyeneyo, iVenice iye yahlaselwa kude kube mva nje ngabakhenkethi bexeshana elifutshane abasuka kwiinqanawa ezinkulu zokuhamba ngenqanawa besoyikisa ubume besixeko sechibi kunye nokuzola kwabantu basekhaya. Abahlali baluthathe olu hlobo lohlaselo njengohlaselo - kwisixeko sabo kunye nobomi babo bentlalo.
Imeko kwenye indawo ibonakala ifana: IAngkor, eyayisakuba sisixeko esizukileyo setempile yamaHindu namaBhuda yookumkani baseKhmer, yaqalisa ukubola ukususela ngenkulungwane ye-15 ukusa phambili yaza yatshatyalaliswa. Kukholelwa ukuba utshintsho lwemozulu (!) kunye ne-hubris yabantu kwazisa ukuwa kwe-Angkor.
Kuphela ngenkulungwane ye-19 abahloli bamazwe baseFransi bafumanisa amabhodlo baze bazisa iAngkor emini. Emva kweMfazwe yaseVietnam, iKhmer Rouges yamakomanisi yaboyisa. Namhlanje, ii-Khmer Rouges ziye zahamba, kwaye "iqela leenkawu kunye nabakhenkethi" (uChristopher Clark, umbhali-mbali wase-Australia) baye baphinda baphinda bawaphinda amabhodlo etempile e-Angkor Vat kunye ne-Angkor Thom.
Kwi-'Expansion du tourisme,' uNksz Anita Pleumaon weTourism Investigation & Monitoring Team (tim-team) ushwankathela: “Iinqobo ezisemgangathweni zale mihla, ezibekwe kuluntu lwase-Asiya oluphuhla ngokukhawuleza, zibonakala zibangele imiphumo eyonakalisayo ngokukhethekileyo kunye nemvakalelo yokuphazamiseka, ukwahlukana, ukungazinzi kunye nokungazinzi. Inkqubo yokurhweba kunye nokusasazwa kweembono ezintsha, imifanekiso kunye nolwazi kwashiya indawo encinci kwizithethe, ukubonakaliswa kwenkcubeko, imilinganiselo yentsapho kunye noluntu. " Ngaba indlela yethu yokuya kwindawo eyakha ikrele elintlangothi-mbini ukusukela ukuba ingqiqo kunye nendlela yokusebenza ilandela iipateni zesimbo sasentshona? Ngaba kukho ukufana phakathi kweenzame zethu ezinyanzelisayo 'zokwakha indawo ekusingwa kuyo' kunye nengqikelelo yasemva kweMfazwe ebandayo 'yokwakha isizwe'?
Obona bungqina bukhohlakeleyo bokungangqinelani kwedemokhrasi yohlobo lwasentshona kunye nokwakhiwa kwesizwe kunokungqinwa e-Afghanistan. I-Afghanistan, ngeminyaka yee-1960s kunye ne-70s indawo enika umdla yohambo kunye nezulu lokuyeka ukuphuma kweYurophu, yayilungiselele ngempumelelo umhlaba wokoyiswa kwamagunya ehlabathi amabini: umkhosi weSoviet ngo-1989 kunye ne-US ekhokelwa ngamajoni e-NATO ngo-Agasti ka-2021. IiSoviets, i-Afghanistan yayiyinto nje yokudlala yamandla, kuba i-US kunye ne-NATO yayiliziko elichongiweyo lobunqolobi bamazwe ngamazwe kunye nokufihla kuka-Osama Bin Laden, i-9/11 ephezulu yabanqolobi.
Injongo yongenelelo lomkhosi we-US-NATO yayikukubhukuqa urhulumente weTaliban ngelo xesha kwaye kubanjwe uBin Laden. Zombini ezi mishini zaphunyezwa, kodwa umngeni oqaqambe ngakumbi watsala umfelandawonye waseNtshona ukuba "uhlale ixeshana," ukuze uhlanganise i-Afghanistan njengedemokhrasi yaseNtshona. Olu sukelo lwasilela ngokulihlazo, imikhosi yabalimi baseTaliban yabuya kwaye yanyanzela i-US kunye ne-NATO ukuba ishiye i-Afghanistan harum scarum-nabantu abaninzi ababhubhileyo, abonzakeleyo okanye abonzakeleyo, iibhiliyoni zeedola ezichithiweyo, kunye namathandabuzo amakhulu ashiyekileyo. Bafikelela kuvuthondaba ngombuzo ongunaphakade kodwa ongaphendulekiyo: Yeyantoni?
Izikhumbuzo ezilusizi zeMfazwe yaseVietnam ziphinde zavela. Imifanekiso yokusinda okumangalisayo kwiihelikopta ukusuka kuphahla lweSaigon ngo-1975 yaxutyushwa ngo-2021, ukuya kwiifoto zesibhakabhaka ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseKabul, kugcwele abantu abaphelelwe lithemba, abanye babo bebambelele kwinqwelo ephantsi yenqwelomoya kwaye bewa…
Ngubani onetyala? Ngubani othatha uxanduva? Kuthekani ngezifundo ezifundiweyo?
Uxanduva ngabo bonke abo bangazange baziqonde okanye bangavumi ukuzamkela izifundo ebebefanele ukuba sele bezifundile ngaphambili: okokuqala, iipateni zoluntu kunye neendlela zobomi bentlalo azikwazi ukudluliselwa kwabanye ngenkani - akukho ndawo kwaye hayi kwaphela e-Afghanistan; okwesibini, umsebenzi womkhosi kukwenza imfazwe, ingekuko ukwakha izikolo, izibhedlele, nokugalela amaqula; Okwesithathu, zombini iiprojekthi zomkhosi kunye nezoluntu zifuna umbono ongqongqo nomiselweyo kwangexesha, okanye injongo ekuya kufuneka yenziwe ngunobangela womntu wonke - hayi nje iinkqubo ezicetywe kakuhle ezinesiphelo esivulelekileyo kunye neenkohliso ezininzi eziphakamileyo; phambili, ubudlelwane obuthungelanayo phakathi kwabaphezulu balapha kunye nabalingane bamazwe angaphandle banotyekelo olomeleleyo lokuqhubela phambili ubuhlanga kunye norhwaphilizo. Olu hlobo 'lweengozi zokunxibelelana' luya kukhokelela kungquzulwano okanye imfazwe kwaye lubangele isiphithiphithi esize ekugqibeleni.
Kaninzi, emva kokuzibophelela emkhosini kangangesiqingatha sexesha elide, ukhetho olungcono lwamaqabane angaphandle lubonakala luyishiya imeko-kunye namava aphindaphindiweyo okubhabha okuhlazisayo, kunokuhamba ngocwangco, kodwa ngoku ngethemba ngesifundo esiphambili esifundiweyo: ukugcina. kwimiba yangaphakathi yamanye amazwe, ngakumbi xa iyantlukwano yezentlalo nenkcubeko kunzima kakhulu ukuyiphepha. Umbhali wesiNgesi-isiDatshi u-Ian Buruma ubhekisa 'kumgibe wobukoloniyali' amagunya amakhulu athanda ukuwela kuwo, ngoko kwaye ngoku.
Ngaba kukude kakhulu ukusebenzisa ithisisi 'yomgibe wobukoloniyali' kuphuhliso lweeNGO zoncedo? Uncedo lophuhliso lwenkcaso lujonge ubukhulu becala uphawu olungapheliyo lweeprojekthi ezininzi zobugcisa, ezineenjongo ezibhabhayo kodwa iziphumo ezincinci ezibonakalayo kuphela. Kuyinyani ukuba iingcali zakwamanye amazwe zinokwenza ngokufanelekileyo kungekuphela nje njengenkxaso kunye nabaqeqeshi, kodwa njengabalamli abathembekileyo phakathi kwamaqela anomdla asekhaya. Uphuhliso loKhenketho kwimixholo yalo eyahlukeneyo kunye neeparamitha alukho nto lukhululekileyo. Yeha, isihendo siyinto yokwenene yokuba ubani ubandakanyeka kakhulu kwimicimbi yangaphakathi yelizwe elibamba umkhosi, kwaye ukuhamba kwengcali kunokuthi kube nomfanekiso-ngqondweni wento yokuba uye waba yinxalenye yengxaki, kunokuba isicombululo sayo.
Ngokuqhelekileyo kuyaxatyiswa kakhulu ukubiza amagama ngokucacileyo kodwa kunikwe imbono ehlekisayo ye-etymological commonality 'yoKhenketho' kunye 'nobunqolobi,' ukuthukwa kunokuba yingozi: Ukhenketho luthanda inkululeko, ubunqolobi bufuna intiyo. Ukhenketho, ngokweyona ntetho yalo imbi, lunokuyibulala kancinci inkcubeko yasekhaya, ngelixa ubunqolobi bubulala kwangoko, ngokujoliswe kuko nangokungakhethiyo, ngaphandle kwenceba, ukanti uKhenketho njengelinye lamaxhoba alo okuqala.
Ukhenketho alunakuqhakaza, apho ubunqolobi bugquba, Ukhenketho lufuna uxolo. Singatsho njani ukuba iTravel & Tourism inegalelo ekudaleni nasekugcineni uxolo? Ngaba kukho nabani na owakhe weva ngendima enkulu edlalwe ngumbutho wezoKhenketho, ngokubambisana nabanye, ngeenzame zokugcina, sithi, i-Afghanistan ilizwe elinoxolo kunye nokunyamezelana kunye nendawo yoKhenketho, ngendlela ebikade iyiyo kwiminyaka yoo-XNUMX?
Kwiminyaka engamashumi amabini emva kwemfazwe, iVietnam iye yaba yindawo enomtsalane yokuhamba, nkqu nolawulo lobukomanisi kwindawo yobungxowankulu (!), kunye nobudlelwane bobuhlobo kunye ne-US kunye nehlabathi. Uthethathethwano lwezopolitiko, uthungelwano lweenkampani zoshishino, kunye notyelelo lwembali lukaMongameli uClinton ngowama-2000 lwenza ukuba urhulumente kunye nobudlelwane becandelo leshishini buqheleke. Ukuhamba kunye noKhenketho bekulandela, kodwa amanyathelo angaphambili anokuthi abonise ukuzibophelela kwe-UNWTO okanye i-WTTC kunzima ukuwakhumbula.
Ngaba singayithatha iVietnam njengeplani enesibindi 'yokulungelelanisa' ubudlelwane ne-Afghanistan Emirate? Ngaba singalindela ukhenketho olumangalisayo lweentaba kwiHindu Kush kwakhona malunga ne-2040s - kunye nama-Islamist Taliban njengabakhenkethi abanobubele?
Uphambene ngokwaneleyo, umntu unokucinga, enikina intloko - iminyaka engamashumi amabini emva kweMfazwe yaseVietnam, uSamuel P. Huntington wapapasha i-blockbuster yakhe yezopolitiko 'Ukungqubana kwempucuko.' Ithiyori kaHuntington yokuba iimfazwe zexesha elizayo aziyi kuqhutywa phakathi kwamazwe kodwa iinkcubeko, zikhokelela kwiingxoxo eziphikisanayo- kunye nokuphinda kuqale 'kweNgxoxo phakathi kwempucuko,' i-counter-thesis leyo isithandi sobulumko sase-Austrian uHans Köchler wayikhusela ngo-1972, kwileta eya kwi-UNESCO kunye ishiywe elubala.
Ngaba imeko yangoku ayinakuthethelela uphazamiso oluzibolekileyo loHambo kunye noKhenketho, kunye nencopho yemibutho i-UNWTO kunye ne-WTTC, ukunceda ukuhlaziya ingxoxo phakathi 'kwempucuko,' ngendlela efanayo nemidiya yedijithali, ngokubonakalayo nangokunamandla, egameni lombono wokwenza “ Uxolo ngoKhenketho – nangona ingekuphela nje”?
Umyalezo ufuna ukubandakanywa kwamaqabane anengqondo efanayo ngaphakathi nangaphandle kweTravel & Tourism, ukudibana kwingcinga kunye nesenzo. Inokuphefumlelwa ziimbono zikaLouis D'Amore ezibhengezwe ngomdla kwaye zikhuselwe njengomseki kunye noMongameli wexesha elide 'Iziko leHlabathi loXolo ngoKhenketho.
Ewe, ukuphupha makube lilungelo labo banethemba kunye nesigqebelo isixhobo sabangenamandla - abanamandla baya kuba nemiba yabo: Ngelixa i-Russian Bear ibuyile kumava ayo 'e-Afghanistan' kwaye yazilungisa kwakhona, i-US Eagle kunye ne-transatlantic yayo. Iingcungcu zisaxakeke kukukhotha amanxeba kuthumo lwazo olungaphumelelanga. Idragoni yaseTshayina ayinako kodwa ukuzonwabisa ngobubi ngenxa yehlazo leentshaba zayo zehlabathi. Kubonakala ngathi ihlabathi liyabaleka lisuka kwiMfazwe Yomlomo ngoko nangoko lisingise kuXolo Loxolo. Oko kuthetha okungaphezulu nje kwemfazwe, kodwa ngokwaneleyo ukubeka emngciphekweni 'oshushu' wenguqu yemozulu yezopolitiko, mhlawumbi hayi ecaleni 'kwemigca yempazamo' yenkcubeko kaHuntington, kodwa ngokumalunga nolwahlulo oludala, oluqhelekileyo lwaseNtshona-Mpuma. Kunzima ukugqitha ingcinga yokuba ubumfama bezopolitiko bunokuthi buqalise “iipateni, ezisuka ekubuyeni kweziganeko – kodwa ubukhulu becala,” njengoko watshoyo isithandi sobulumko uLeibniz. Okunjani kona ukubhanga kobuchule bezobupolitika ukususela oko i-Iron Curtain yathi shwaka!
Kukho enye ingcamango ephosakeleyo ngale ndlela: “Xa uMntu engena ehlabathini njengomphangi, ihlabathi liya kumnyanzela ukuba aqhubeke ephila njengesihange. Le yimpendulo yehlabathi, sinokuthi, ukuziphindezela kwalo,” utsho uLudwig Fusshoeller kwi-'Die Dämonen kehren wieder' ('UkuBuyisa kweeDaemons'). Abatyeleli abathathwa njengabangeneleli, baya kuphathwa ngolo hlobo, nokuba ngabakhenkethi abalula, oosomashishini abafikelelayo - okanye imikhosi yamazwe angaphandle! – Sinokuthini? 'Bye-bye ukwamkela isiko' akuyi kwanela.
Kwidrama kaGoethe edume kakubi, injongo yokwenyani kaFaust imiselwa luloyiso lwakhe kwindalo. Nangona kunjalo, kanye njengoko eziva onwabe kakhulu ngokuba ephumelele iprojekthi yakhe yokuzicingela, uphulukana nokubheja kwakhe noMephisto aze abongoze athi: “Ngoko ke, okwangoku ndinokuba nobuganga bokuthi: ‘Khawume! Uthandeka gqitha!’”
Ukuba sijonga iplanethi yethu namhlanje, siyaqonda ukuba 'ilizwe laseFaustian' libuyile ngokuphandle, ngelixa ubungangamsha bunxibe ngokutsha ubungangamsha obumangalisayo bexesha elidlulileyo kunye nomnqweno wokungaphelelwa lixesha wabamkeli kunye neendwendwe, uhambelana nesiqalekiso esothusayo sobhubhane - "Ukuhlala ixesha elide ..."
Umbhali, UMax Haberstroh, Lilungu elisekayo le Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN).